yehlisa imiholo yezisebenzi i-independent media kulandela ukuqubuka kobhubhane i-coronavirus - Ilanga News
Home Izindaba yehlisa imiholo yezisebenzi i-independent media kulandela ukuqubuka kobhubhane i-coronavirus
yehlisa imiholo yezisebenzi i-independent media kulandela ukuqubuka kobhubhane i-coronavirus
IGCIWANE lobhubhane iCovid-19, lufike nezindaba ezimbi enkampanini ekhiqiza amaphephandaba kuleli, i-Independent Media Group njengoba abanikazi bayo bememezele ukuthi bazokwehlisa imiholo ezisebenzini zayo.
Lesi sinqumo sokwehlisa imiholo ezisebenzini, bathi senziwe wukungadayiseki kahle kwezikhangiso emaphephandabeni angaphansi kwalesi sitebela ngenxa yalolu bhubhane.
Esitatimendeni esikhishwe yile nkampani, izisebenzi sezazisiwe ngokwehla kwemiholo yazo. Labo abahola kakhulu kuthiwa yibona abazoshayeka kakhulu bese kuthi labo abahola kancane, behliselwe imbijana. Le nkampani ishicilela amaphephandaba okubalwa kuwona Isolezwe neMercury. I-African News Agency (ANA), eyingxenye yale nkampani, nayo imemezele ukwehliswa kwamaholo ezisebenzini zayo ngo-45%.
Zombili lezi zinkampani zithi amaholo ezisebenzi yiwo axebula imali enkulu okuzoba nzima ukuwagcina enjalo njengoba izinka-mpani ezinkulu ezifaka izikhangiso kula maphephandaba, zizihoxisa izikhangiso zazo.
Lokhu kuqale ukwenzeka ngemuva komyalelo kamengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa, wokuthi abantu kumele bahlale emakhaya izinsuku eziwu-21
ukunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane. “Lokhu kuzoqhubeka kuze kube isimo siba ngcono. Kayikho enye indlela esingenza ngayo,” kusho lesi sitatimende esihlanganisiwe.
IMail & Guardian nayo iveze ukuthi ekupheleni kwale nyanga kungenzeka ingakwazi ukukhokhela izisebenzi zayo ngenxa yokwehla kwezikhangiso ephepheni okudalwa yiCovid-19.
UMhleli weMail & Guardian, uNkk Khadija Patel uthi izikhangiso okuyizona ezofaka imali engango-70% enkampanini nezikhangiso ezithinta amaqoqo abantu ezifaka u-20% enkampanini nazo zime nse, kakungeni lutho.
“Umkhakha wezokuxhumana udonsa kanzima kulesi sikhathi ngenxa ye-corona eyenza ukuba kushintshe indlela abantu abaphila ngayo kwashintsha nendlela abantu abafaka ngayo izikhangiso nendlela abathola ngayo izindaba,” kusho uNkk Patel.
Previous articleUzofihlwa ngoLwesine uJerry Mohlakoane
Next articleEzimnandi kubalandeli beChiefs ngoManyama